Chelsea iyo Manchester United oo Bar-bar dhac ku kala baxay iyo Tottenham oo guul gaartay: Natiijooyinka Kulamada Premier league
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea iyo Manchester United oo Bar-bar dhac ku kala baxay iyo Tottenham...
Kooxda Chelsea ayaa bar baro kula gashay Garoonkeeda Kooxda Manchester United kulan ka tirsan Horyaalka Premier league.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xamaasad leh iyadoo bilowgiiba VAR lagu qasbay inay dib u eegis ku sameysay kubad ay gacanta ku wada taabteen Hudson-Odoi iyo Mason Geenwood oo ku dhex jiray xerada goolka Chelsea.
Muuqaalka ku celiska ayaa muujiyay in Hudson-Odoi uu kubada gacanta ku hor taabtay ka hor inta uusan gacanta ku sii taaban Greenwood, iyadoo garsooraha uu shaashada eegay haddii ay rigoore tahay, laakiin wuxuu go’aansaday inuusan rigoore ka dhigin Hudson-Odoi isagoo u sababaeeyay inay kama aheyd.
Wixii dhacdadaas ka danbeeyay waxaa hoos u dhacay tayadii iyo xamaasadii ciyaarta iyadoo fursadii ugu fiicneyd ay heshay Chelsea ka dib kubad madax aheyd uu goolka United ku sigay Olivier Giroud kasoo uu soo dhigay Hudson Odoi. Waxaa lagu kala nastay barbaro gool iyo gool ah.
Waqtigii nasashada tababare Thomas Tuchel ayaa bixiyay Calum Hudson-Odoi isagoo qeybtii labaad ku soo bilaabay Reece James. Afar daqiiqo markii ay socoyay qeybta labaad Chelsea ayaa heshay fursad weyn iyadoo De Gea uu kubad cajiib ah ka badbaadiyay Hakim Ziyech ka dib markii uu Ben Chilwell meel cidlo ah uga soo tagay Wan-Bissaka.
10kii daqiiqo ee ugu horeysay qeybta labaad si la mid ah qeybtii hore Chelsea ayaa kubada heysatay inta badan, laakiin Man United ayaa weerar deg deg ah qaaday daqiiqadii 60aad iyadoo kubad loo celiyay Soctt McTominay oo darbo kulul oo halis aheyd goolka ku tuuray uu soo badbaadiyay goolhaye Mendy.
Natiikada ayaa ka dhigan in Chelsea ay ku jirto kaalinta Shanaad iyadoo leh 44 Dhibcood Halka ay Manchester United ay leedahay 50 dhibcood iyagoo ku jira Booska labaad.
Chelsea ayaa kulanka xiga la ciyaareysa Liverpool Khamiista Halka Manchester United ay booqandoonto Crystal Palace.
Kulamada Kale ee la Ciyaaray
PREMIER LEAGUEFEBRUARY 28
FLeicester City 1-3 Arsenal
FChelsea 0-0 Manchester United
Previous articleMadaxda Liverpool oo shaki ka qaba mustaqbalka dheer ee Jurgen Klopp’
Next articleMikel Arteta oo ka hadlay Guusha Arsenal ay ka gaartay Kooxda Liecester City